Izindlu ezincinci phakathi kwamachibi - i-Eldorado yam
Sieraków, Wielkopolskie, Poland
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguGrzegorz
Ukuba uyathanda isandi semithi kunye neentaka eziculayo, le ndawo ikulungele wena. Ingakumbi kwiintsapho ezinabantwana.
Amakhaya eeholide afumaneka kwihlathi lepine phakathi kwamachibi amabini amahle. Izindlu zincinci, kodwa zicocekile kakhulu - ngoMeyi ka-2021 satshintsha zonke izixhobo, ifenitshala, amakhitshi kunye nezibane kuzo.
Iziko lethu elisondeleleneyo linebala lalo (elivaliweyo) lokudlala kunye nenani lezinto ezinomtsalane ebantwaneni. I-500m ukusuka ezindlwini uya kufumana ulwandle oluhle lwesanti kwiLake Jaroszewskie.
Eli ziko likwindawo entle yokujonga ipaki kwindawo ekufutshane nehlathi laseNotecka. Kukho amachibi akufutshane: iLutomskie kunye neJaroszewskie, zityebile kwiintlanzi kunye namanzi acocekileyo. Ungaqubha, ulobe, uhambe ngesikhephe kunye nokusefa emachibini. Unxweme olusecaleni kwechibi lunesanti, lulungiselelwe abakhenkethi.
Kanye ngakwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide kukho ivenkile yokutya, ikhefi kunye nerestyu.
Umbuki zindwendwe ngu- Grzegorz